Dirqaalee dhangeessuu tarrewwan lakkoofsa ykn rasaasa'ee qindeessa yoo barbaadde, tokkoon tokkoo sadarkaalee tarree sadarkaa keessatti dhanga'ina fayyamuu ni dandeessa.
Dhangii - Rasaasaalee fi Taasiisaa Lakkoofsaa fili. Cancala Dirqaloota cancala fuulaa bani
Sadarkaa(lee) fooyyessuu barbaaddu fili, ittaansuudhaan dhangeessuu fayyadamuu barbaaddu ifteessi.
Sadarkaa(lee) dirqaalee dhaangessuu hiikuuf barbaadde fili. Sadarkaan filatame duraargii keessatti shoolameera.
Haalata lakkoofsa kennuu sadarkaalee filatamanii fili.
Lakkoofsa biyya Arabiyaa
Lakkoofsoota Roomanota(qubee guguddaa)
Lakkoofsoota Roomanota(qubee xixiqqaa)
Tartiiba lakkaawwii qubee xiixiqqaa
Qubaayaa lakkoofsa kennuu qubee xiixiqqaa
Sarara ka'uumsaatti rasaasa ida'a Dirqala kana fili, ittaansuudhaan haalata rasaasaa filuudhaaf qabduu Arfii cuqaasi.
Hojjaa sarara ammeen walsimuuf, rasaasawwan hagamataa isaa jijjiru. Yoo barbaadde, Haalata Arfii hammamtaa bocquu gararagaa rasaasaaf fayyadamu fili cuqaasi.
Rasaasaaf calaqqee agarsiisi. Dirqaalee kana fili, ittaansuudhaan faayila calaqqee fayyadamuu barbaadde kaa`uudhaaf Fili cuqaasi. Calaqqeen galmeetti ida`ameee argama.
Rasaasaaf calaqqee agarsiisi. Dirqaalee kana fili, ittaansuudhaan faayila calaqqee fayyadamuu barbaadde kaa`uudhaaf Fili cuqaasi. Calaqqeen akka geessituu calaqqee faayiliitti saagamee argama.
Haalata lakkoofsa kennuu hin fayyadamu.
Jireessi dirreewwan armaan gadii haalata sanduuqa Lakkoofsa kennuu keessaa filtu irratti hundaa'a.
Fuuldura lakkooofsa tarree keessaatti agarsiisuuf, arfii ykn barruu galchi.
Duuba lakkoofsa tarree keessatti agarsiisuuf arfii ykn barruu galchi. Tarree lakkaa'ame kan haalata "1.)",fayyadamu uummuu yoo barbaadde ".)" sanduuqa kana keessatti galchi.
Sadarkaalee xixiqqoo mul'isi
Sadarkaa ammeettif ka'uumsa lakkoofsa haara galchi.
Haammamtaa sadhaatawwaaHammamta waliitti dhufeenyaa qabu
Qaaqa Arfoota Addaa bana, bakka mallattoo rasaasaa filuu dandeessuu.
Select the graphic, or locate the graphic file that you want to use as a bullet. Saxaatoo fili. ykn faayilii saxaatoo akka rasaasaatti fayyadamuu barbaadde kaa'i.
Saxaatoodhaaf hojjaa galchi.
Wal madaaliinsa hammamtaan saxaatoo kabachiisa/eega/.
Hiriirfama dirqaalee saxaatoodhaaf fili.
Dirqaalee lakkoofsa kennuu sadarkaalee maraaf qindeessi.
Title is: Dirqaalee